﻿﻿ Puntland State of Somalia – Madaxweyne Gaas oo 200-macalin miisanayida sanadkaan ugu daray wasaarada waxbarashada daahna furay Shirweynaha labaad ee dib u eegida Waxbarashada Puntland .
Madaxweyne Gaas oo 200-macalin miisanayida sanadkaan ugu daray wasaarada waxbarashada daahna furay Shirweynaha labaad ee dib u eegida Waxbarashada Puntland .
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 15-3-2015 si rasmi ah u daahfuray Shirweynaha labaad ee dib u eegida Waxbarashada Dawladda Puntland.
Furitaanka Shirweynahaan ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Wasiirka Waxbarashada Dawladda Federaalka Soomaaliya Khadar Bashiir Cali, Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland, wasiiro iyo madax kale oo katirsan xukuumada Puntland, waxgarad, aqoonyahano, madax ka soctay hay’addaha caalamiga ah ee ka howl-gala Puntland, iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Wasaarada wabarashada iyo tacliinta sare ee Dawladda Puntland ku amaanay horumarka balaaran ee sanad gudihiis ay ku talaabsatay.
” Runtii wasaaradani waxay noo tahay wasaarad ku dayasho mudan marka la eeego shaqada ay hayso iyo guusha ay u soo hoysay Puntland, waana ku mahadsan yihiin halka wanaagsan ee ay maanta gaareen ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
“Hadii aynaan dadkeena waxbarin, hadii aynaan teknoolajiyad yeelan, hadii aynaan kaabayaasheena dhaqaalaha horumarin aqoon mahelayno, horumarna samaynmayno meelna ma gaarayno ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in muhiim tahay in xukuumada Puntland iyo Ganacsataduba iska kaashadaan sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada wax baratay si looga baxo shaqo la’aanta jirta.
“Waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo in wasaarada waxbarashada sanadkaan dhaqaalaha ku darsano laba boqol oo Macalin (200) maadama loo baahan yahay in la kordhiyo macalimiinta” Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Gaas.
Shirweynahaan labaad ee dib u eegida Waxbarashada Dawladda Puntland ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah la soo gebagebeeyo, waxaana si qoto dheer loogu falanqeynayaa heerka horumarineed ee waxbarashada dawladda Puntland oo sanadba sanadka ka dambeeya horumar laga gaarayo.
By Puntland State Site Editor|2015-03-17T08:25:38+00:00March 17th, 2015|Latest News, Somali news|Comments Off